Salama ry mpilalao Granny, leo ve ianao sao tratran'ny renibeny? Raha eny dia eto izahay miaraka amin'ny hack mahavariana ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Granny Outwitt Mod Apk. Io no mod an'ny Granny, izay manolotra fifehezana tanteraka ny lalao ho an'ny mpilalao.
Araka ny fantatrao dia lalao sarotra i Nenibe. Noho izany dia mila fotoana be ny mahatakatra sy miaina mandritra ny dimy andro ao amin'ny trano voafandrika. Saro-pady loatra ilay renibe ka naheno feo madinidinika sy nihaza anao, izay handany ny asanao isan'andro.
Ny tena tanjon'ity lalao ity dia ny hivoaka ny trano, amin'ny famahana ny piozila rehetra miaraka amin'ireo fanoroana misy ao an-trano. Raha tsy misy ny nenina, misy ihany koa ny hafa toy ny hala amin'ny lafarinina ambony, izay miaro ny famantarana sy ny hafa.
Ka eto izahay miaraka amin'ity kinova maodely ity, izay ahafahanao milalao tsotra izao araka izay tianao. Azonao atao ny mamono, hala ary ny hafa. Afaka mandany ny andro ao an-trano toy ny mpanjaka ianao. Hizara ny rohy fampidinana aminao rehetra izahay, saingy tokony ho fantatrao izany. Alohan'ny hampiasana azy dia mijanona miaraka aminay ary mankafy mijery ity app ity.
Topimaso momba ny Granny Outwitt Mod Apk
Izy io dia rindrambaiko modded Android, izay manolotra ny fanesorana ny fetra rehetra amin'ny lalao mampihorohoro tsara indrindra Granny. Mod amin'ny mpankafy azy io ho an'ireo mpilalao diso fanantenana rehetra amin'ity lalao ity. Manolotra ny tsara indrindra hilalao ity lalao Android ity tsy misy famerana.
Lalao Mod manolotra hacks an-taonany maro, izay azonao ampiasaina amin'ny lalao amin'ny fotoana rehetra. Manolotra hacks samihafa izy io, izay ahafahanao mamita ny andro rehetra ao anatin'ny ora vitsivitsy monja. Ny iray amin'ireo hacks tsara indrindra dia ny fomban'Andriamanitra, io no fomba tsara indrindra hialana amin'ny fameperana rehetra satria rehefa ao amin'ny fomban'Andriamanitra ianao dia tsy misy afaka mamono anao.
Granny Outwitt Apk dia manolotra hack Stuck, izay ahafahanao manala ny hala amin'ny lalao. Azonao atao mihitsy aza ny mampiasa ny kill hack, izay ahafahanao mamono azy tanteraka ary tsy hiverina intsony izy amin'io andro io. Amin'ny alàlan'ity mod mod ity dia azonao atao ny mandefa zavatra any amin'ny toerana hafa.
Raha te hampiasa ny Shout Gun ianao dia hahazo ilay basy Shout, izay hamonoanao azy imbetsaka. Ny bala an'ny Shotgun dia misy ihany koa, izay azonao ampiasaina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny ammo tsy voafetra. Hanome ammo tsy voafetra ho an'ny basim-borona ianao.
Misy ihany koa ny hacks amin'ny endri-tsoratra hafa, izay ahafahanao mamorona endrika ny tarehin-tsoratra rehetra sy ny endriny.
Azonao atao ny mampihena ny hery misintona, izay hianjera tsikelikely ireo zavatra nilatsaka. Haingana haingana, izay ahafahanao mihetsika haingana kokoa. Manova ny habeny, izay ahafahan'ny mpilalao sy ny haben'ny hafa hifehy amin'ny tanana.
Azonao atao koa ny mahazo zavatra hafa amin'ity dikan-teny ity. Afaka mahazo hena, kapoaka entona, bateria fiara ary zavatra hafa rehetra ianao, miaraka amin'izy ireo dia afaka mamita mora foana ny iraka ianao. Misy endri-javatra maro hafa azo alaina amin'ity lalao ity, izay azonao jerena. Noho izany, alaivo izany ary manomboka mikaroka ny trano manontolo tsy misy tahotra.
anarana Granny Outwitt Mod
Anaran'ny fonosana com.dvloper.granny
Misy endri-javatra an-taonina ao amin'ity kinova ity, azonao ampiasaina sy milalao tsy misy tahotra. Ny sasany amin'ireo fiasa voalaza ao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy misy maro hafa azonao zahana ao. Izahay dia hizara ny lisitry ny fiasa lehibe aminao eto ambany.
Misy ny maody samihafa
tsy manam-petra Ammo
Ampitomboy ny Timescale
Vaovao io eny an-tsena, Ka, tsy misy amin'ny tranokala hafa. Fa ho anay rehetra no itondrana an'ity fampiharana ity. Azonao atao ny misintona ny tsimbadika mod amin'ity pejy ity. Tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Granny Outwitt Mod Apk no fomba tsara indrindra hilalaovana ity lalao ity, tsy misy fameperana na tahotra. Afaka mifindra na aiza na aiza ianao, tsy misy olana. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary esory im-betsaka izy. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny tranokalanay ho an'ny fampiharana sy fika mahavariana kokoa.
Sokajy Games, Arcade Tags Granny Outwitt Apk, Granny Outwitt Mod Apk, Granny Outwitt Mod App, Lalao Mod Post Fikarohana